मध्यरातमा परपुरुष संग सु’तेकी महिला कै कोठामा पुग्यो युट्युवर संगै श्रीमान, वास्तवमै यो समाज कता जाँदैछ ? – Classic Khabar
मध्यरातमा परपुरुष संग सु’तेकी महिला कै कोठामा पुग्यो युट्युवर संगै श्रीमान, वास्तवमै यो समाज कता जाँदैछ ?
August 16, 2021 296
अहिले युट्युवमा श्रीमान श्रीमतीका विवाद र वहुविवाह लगायतका विषय हेडलाइन बन्ने गरेका छन् । कसको श्रीमती को संग गयो ? रंगेहात कोठामा पक्राउ परे लगायतका भिडियो ट्रेण्डिङमा आउने गरेका छन् । पत्रकारीताको मर्म र क्षेत्रमै नपर्ने यस्तो घटनाहरुले सामाजिक सञ्जाल र युट्युव ढाकेका छन् । नितान्त ब्यक्तिगत जीवनमा प्रवेश गरेका युट्युवरहरुले प्रहरीले जस्तै कोठा कोठामा छापा मार्ने गरेका छन् ।
एउटा क्यामेरा लिएर अरु सुतेका कोठामा लेन्स घुमाउँदै पुग्ने युट्युवरले महिलालाई सोध्ने प्रश्नले वास्तवमै यो समाज कता जाँदैछ भन्ने देखाउँछ । तपाईको ल सप स यो पुरुषसंग मात्र हो की अरु पनि छन् तपाईका केटा ? पत्रकार दावी गर्दै अरुको कोठामा छापा मार्न पुगेका युट्युवरले महिलालाई सोधेको प्रश्न हो यो ।
तपाईको श्रीमान हामीले लिएर आएका छौं तपाईको श्रीमान निकै पीडित हुनुहुन्छ, क्यामेरा लिएर कोठामा पुगेका युट्युवरले एक महिलाको अस्मिता माथि गरेको प्रश्न हो । पारिवारिक विवादका कुरा आफै नमिलाएर क्यामेरा र युट्युवर बोलाउने समाजका पुरुषवादी सोचका कारण अहिले दिनहुँ महिलाका विषय यसरी उचालिने गरेका छन् । उनीहरुको इज्जत, सम्मानलाई क्योमेराको लेन्सले धज्जी उडाइरहेको छ ।
तल उल्लेख गरिएको यो भिडियोमा महिलाको सम्बेदनशिलता, पारिवारिक विवाद माथि युट्युवरको डलर खेती राम्ररी देख्न सकिन्छ । यो भिडियोमा पत्रकारीताको धर्म कत्तिको निर्वाह भएको छ त्यसको मुल्याकंन आफै गर्न सक्नुहुनेछ ।
Prevअफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश भाग्दा जे देखियो, भिडियोमा हेर्नुहोस्
Nextअफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता कब्जा गर्दा किन हुँदैछ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रशंसा
तिलोत्तमा स्कूटी दु’र्घटना परि गुल्मीकी प्रतिभाशाली चेली सुस्मिताको नि’धन